शनिबार पनि सेवा सुरु गर्ने तयारी हुँदैछ–डा. लासिवा
(भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको जनस्वास्थ्य केन्द्र भक्तपुरका इन्चार्ज डा. रत्नसुन्दर लासिवासँग केन्द्रले पुर्‍याउँदै आएको सेवा, कमजोरी र आगामी योजनामा केन्द्रित रही मजदुर दैनिकले लिएको लिखित अन्तरवार्ता प्रस्तुत छ: सम्पादक)
जनस्वास्थ्य केन्द्र भक्तपुरमा अहिले के–के स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध छन्, बताइदिनु भए जनताले जानकारी पाउने थिए।
जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्र भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ९, च्याम्हसिंह, वडा नं. ५ भगवतीस्थान र वडा नं. २ व्यासी (बासु उच्च मा. वि. को पुरानो भवन) मा गरी तीन ठाउँहरूमा सञ्चालित छन्। ती केन्द्रहरूमार्फत विभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गरिंदै आएको छ।
जनस्वास्थ्य केन्द्रलाई २५ शैय्या अस्पतालको स्वीकृति आइसकेको खबर छ। नेमकिपाले निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि अस्पताल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। अस्पतालको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार बनाउने योजना भइरहेको होला, जानकारी पाए हुन्थ्यो।
जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई स्तरोन्नति गर्न २५ शैय्याको अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति पाइसकेको खबर यथार्थ हो। नेमकिपाले निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि अस्पताल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको र सोहीअनुरुप नै जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकोले नै हुनुपर्छ उहाँहरूको कार्यकाल सुरु भएदेखि नै अस्पताल सञ्चालनको लागि बारम्बार उत्प्रेरित गरिरहनुभएको छ।
अस्पताल सञ्चालनको लागि पक्की भवनको लागि नक्सा तयार गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ र पक्की भवन नबनेको अवस्थामा केही शैय्या भए पनि विरामी भर्ना गर्न मिल्ने गरी अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि व्यवस्थापन पक्ष लागिरहेको छ। केही समयको अन्तरालमा नै 'ख्वप अस्पताल' ले मूर्त रुप लिँदैछ।
बिरामी सङ्ख्या पहिलेको तुलनामा अहिले बढिरहेको देखिन्छ, दैनिक कति सङ्ख्यामा रोगीहरू सेवाको निम्ति आउने गरेका छन्? व्यवस्थापन पक्षमा के–के समस्या तथा चुनौती थपिएको छ?
जनताको जनस्वास्थ्य केन्द्रप्रतिको विश्वासले बिरामी सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। हिजो आज सरदर ३०० जना रोगीहरू सेवाको निम्ति आउने गरेका छन्। रोगीहरूको सेवा स्वास्थ्य केन्द्रले सक्दो गरिरहेको छ र पनि कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यकर्मीहरू नपुग हुने, विरामीलाई व्यवस्थित रुपमा राख्न ठाउँको अभाव, विरामीले खोजेको जस्तो विशेषज्ञ सेवा दिन नसक्नु, समय सापेक्ष सेवाहरू जस्तै अल्ट्रासाउण्ड सेवा दिन नसक्नु हाम्रो समस्याको रुपमा देखा परेका छन्। ती समस्या समाधानको उपाय पनि हामीले खोजिरहेका छौं।
उपचारका निम्ति आउने बिरामी घण्टौं उभिएर टिकट काट्न लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। कुपन प्रणाली बनाउनेबारे सोच्नुभएको छ कि छैन? कम्प्युटरमा नाम दर्ता गर्ने आदिबारे केही योजना बनाउनुभएको होला?
बिरामीलाई घण्टौंसम्म उभिएर टिकट काट्नु पर्ने अवस्था अन्त्यको लागि हामीले काम थालनी गरि सकेका छौं। अन्य अस्पताल वा सेवा केन्द्रहरूमा जस्तै हामीले कम्प्युटर प्रणालीबाटै नाम दर्ता व्यवस्था गर्ने तयारी अगाडि बढाएकोले टिकट लिन अझ सहज हुने आशा छ।
गाउँबाट आउने बिरामी एक–डेढ घण्टा हिंडेर स्वास्थ्यचौकी पुग्छन्। लाममा बस्दै गर्दा ३० जना पुग्यो, अब रोगी जाँच्दैन भनी डाक्टरहरू जाने र उपचार गर्न नपाई फर्कनुपर्ने दुःखेसो पोखेको सुनियो। यसको कारण र वैकल्पिक उपायको बारे केही सोच्नुभएको छ कि?
भक्तपुर नगरपालिकाबाहेक अन्य नगरपालिका वा ठाउँबाट आउने विरामीको लागि जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा केही रोगहरूका विशेषज्ञ सेवा सहज छैन। त्यस असहजताप्रति हामी क्षमाप्रार्थी छौं।
हामीले उपलब्ध गराउँदै आएका विशेषज्ञ सेवाहरू सम्बन्धित डाक्टरहरूको उपलब्ध समयको आधारमा सञ्चालन गरिरहेका छौं। त्यसले कुनै कुनै विषयका डाक्टरहरूको सेवा सीमित विरामी सङ्ख्याको लागि हुने गरेको छ।
त्यसको विकल्पको रुपमा सम्भव भएका विशेषज्ञ सेवाको हामीले साँझपनि उपलब्ध गराउन सुरु गरेका छौं। आशा गरौं अन्य बाँकी विशेषज्ञ सेवा पनि उपलब्ध हुँदै जानेछ।
जनस्वास्थ्यमा उपचारको निम्ति आउने बिरामीअनुसार सहयोगी सङ्ख्या अपुग देखिन्छ। यो समस्याबारे बेला बेला गुनासो आएको पाइन्छ। यसको समाधान कहिले होला?
जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्र हामी सबैको आफ्नो साझा संस्था हो। यो मुनाफारहित संस्थालाई हामी सबैले सहयोग गर्‍यौं भने यसले अझ सेवामा उचाई लिनेछ। हामी आफू–आफू मिलेर लाइनमा बस्ने, आफ्नो पालोअनुसार जाँच गराउने, केन्द्रको सरसफाइको निमित सहयोग गर्ने तथा अत्यन्त सिकिस्त, कमजोर विरामीहरूलाई हामीले प्राथमिकता दियौं भने अहिले उपलब्ध सहयोगी सङ्ख्या त्यति नपुग नहोला कि?
अस्पतालको फोहर व्यवस्थापन पनि उपयुक्त ढङ्गले भइरहेको पाइन्न। यसबारे स्पष्ट पार्नुहुन्छ कि?
अस्पतालको फोहर व्यवस्थापन एउटा हाम्रो ठूलो चुनौति नै हो। त्यसको व्यवस्थापनको लागि हामीले एउटा फोहर जलाउने ठाउँ बनाएका थियौं र केही मात्रामा फोहर व्यवस्थित पनि गरेका थियौं। तर हिजो, आज त्यो माध्यम उपयुक्त मानिंदैन। त्यसैले बैकल्पिक व्यवस्थाको लागि छलफल अगाडि बढाइएको छ।
रातीको निम्ति गेटमा बस्ने कोही नहुँदा लागूपदार्थ दुर्व्यसनी, गुण्डा आदि जबरजस्ती जनस्वास्थ्य केन्द्रभित्र छिरेको घटना सुनिन्छ। केन्द्रको सुरक्षाको थप बन्दोबस्तबारे पनि सोच्नुभएको छ कि छैन?
रात्रीकालिन गार्ड वा सुरक्षाकर्मी नभएर बेला बेलामा हामीले समस्या भोग्नु परेको छ। त्यसको व्यवस्थाको लागि व्यवस्थापन समितिमा छलफल अगाडि बढाइएको छ।
केन्द्रमा एक्स रे मेसिन पुरानो खालको भन्ने जानकारी आइरहेको छ। नयाँ र आधुनिक मेसिन भित्रिने हो कि होइन? भिडियो एक्सरे सुविधा थप्नुपर्ने माग छ, बजेट छुट्याइएको पनि सुनिएको छ। कुरा के हो बताइदिनुहुन्छ कि?
जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्रको एक्स–रे मेसिन पुरानोभन्दा पनि त्यसमा एउटा प्रणाली जडान गर्नुपर्ने अवस्था हो। त्यसरी प्रणाली जडानपछि कम्प्युटरमा पनि एक्स–रे हेर्न सकिने छ र छिटो हुन्छ। त्यसको लागि हामीले यसै आर्थिक वर्षमा एक्स–रे सुधार तथा अल्ट्रासाउण्ड व्यवस्थाको लक्ष्यसहित बजेट व्यवस्था गरेका छौं।
हृदयघात भएर आएका बिरामीको प्रारम्भिक जाँचको लागि ल्याबमा कुनै प्रबन्ध छैन भन्ने सुुनिन्छ। त्यति व्यवस्था गर्नेबारे कुनै योजना छ?
हृदयघात भएर आएका बिरामीको प्रारम्भिक जाँचको लागि ल्यावमा केही प्रबन्ध पक्कै छ। तर उच्चस्तरीय अस्पतालमा जस्तो भने छैन। हाम्रो स्तरअनुसारको व्यवस्था हामीले गरेका छौं।
शनिबार र सन्ध्या समयमा पनि उपचारको व्यवस्था भए रोगीहरूले सुविधा पाउने थिए, यसबारे पनि बताइदिनुहुन्छ कि?
हाम्रो उद्देश्य भनेकै रोगीहरूको लागि सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु नै हो। त्यसको लागि हामी बिहान, बेलुका, दिउँसो वा कुनै बार नभनी सेवाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं। कुनै आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या भएमा चौवीसै घण्टा आकस्मिक सेवा उपलब्ध छ। हाडजोर्नी तथा नशा रोग, छाला तथा यौन रोग, दन्त स्वास्थ्य परीक्षणजस्ता सेवाहरू साँझको समयमा पनि उपलब्ध छन् भने शनिबार नियमित सेवा खोल्ने विषयमा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं।